जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ ! - dautarimedia.com
तिबेला तपाईंको मृ:त्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक ला:स बन्न सुरु गर्छ । अरे … ला’स लिएर आउनुहोस्। … ला’स लाई उठाउनुहोस्। .. ला’स लाई सुताउनुहोस। . यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन् , जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पुर्ण जिबन बिताउनुभयो । फ़ेरि पनि नाच्नुहोस । ति खुशिहरु महसुस गर्नुहोस् । फोटोहरु खिच्नको लागि पागल जसरी पोज दिनुहोस् । एकदम सानो बच्चा जस्तै बन्नुहोस । किनकि मृ त्यु जिबनको सबैभन्दा ठूलो ला”स होइन । ला’स त त्यो हो , तपाईं जि’उँदो भएर पनि तपाईं भित्र जिन्दगी जिउनुको आशा हराउदै गएको छ हरेक पल हाँसी खुशी जिन्दगी बिताउनुलाई नै जिन्दगी भनिन्छ।जिन्दगी थोरै छ , हरेक पल म खुशी छु . काम मा खुशी छ, आराम गर्दा खुशी छु आज खाना मा मासु छैन, दाल मा पनि म खुशी छु आज गाडी छैन , हिडेर जान पनि म खुशी छु साथिहरुको साथ छैन, एक्लै पनि खुशी छु\_ आज कोही रिसाएको छ, उ रि:साएको छ मलाई थाहा भएर पनि म खुशी छु।जसलाई देख्न सक्दिन , उसको आवाज सुनेर पनि खुशी छु। जसलाई पाउन सक्दिन , उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु। हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ , उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु.भोलिको बारेमा थाहा छैन , पर्खाइमा पनि म खुशी छु. हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय , आज मा पनि म खुशी छु. जिन्दगी छ छोटो , हरेक पल म खुशी छु । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous: चो’री आ’रोप’मा समातिएका युवा’को प्रहरी हि’रासता’मा मृ’त्यु